Shina fametahana fitaratra fitaratra makarakara Kinzon10 orinasa sy mpamatsy | Kinzon
Fandrindrana fitaratra fitaratra vita amin'ny Kinzon10
Fandrindrana fitaratra fitaratra varavarankely -Kinzon10 dia vokarina amin'ny alàlan'ny fiheverana ireo antenaina samihafa ataon'ny mpanjifantsika; koa ny varavarankely fitaratra fitaratra varavarankely -Kinzon10 lasa iray amin'ireo rafitra takiana indrindra eo amin'ireo vokatrao rehetra.Firina varavarankely fitaratra varavarankely -Kinzon10 dia mandeha tsara sy azo ampiharina amin'ny lafiny fepetra momba ny fahazoana teknika; mifanentana koa hampiana toerana vaovao amin'ny toerana anaovana izany.
Fandrindrana fitaratra varavarankely fitaratra-Kinzon10
Miaraka amin'ny efitra lamba eo amin'ny varavarankely fitaratra -Kinzon10, azonao atao ny manatanteraka ny nofinofinao amin'ny fampiasana balkonao anao mandritra ny taona. Varavarankely fitaratra fitaratra varavarankely -Kinzon10 miaro amin'ny rivotra, ny orana ary ny tabataba. Varavarankely fitaratra varavarankely mivolom-baravarankely -Kinzon10 dia afaka misokatra feno, noho izany ny fizarana fitaratra azo atao misintona amin'ny fotoana rehetra ary afaka mankafy ny lavarangana misokatra.
Endrika rafitra ho an'ny lambam-baravarankely fitaratra varavarankely -Kinzon10
1. Varavarankely fitaratra varavarankely fitaratra -Kinzon10 nampiasaina ho an'ny ankamaroan'ny karazan-davarangana fantsona, manokana ho an'ny glazing terrace.
2. Ny mombamomba ny oniversite: Varavarankely fitaratra fitaratra-kaonty -Nyzon10 dia manana mombamomba onitra ho an'ny profil ambony izay afaka manitsy ny elanelana eo anelanelan'ny varavarankely sy ny valindrihana.
3. Ranon-tsoroka: Varavarankely fitaratra varavarankely makarakara -Kinzon10 nampiasa kodiarana lehibe mitondra kodiarana mba hisosa moramora ny Panes.
4. habe Pane: Ny halavam-baravarankely fitarihan'ny varavarankely fitaratra -Kinzon10 dia 800mm ary ny haavon'ny max dia 2500mm ho an'ny takelaka fitaratra tsirairay.
5. famaky Hinge: varavarankely fitaratra varavarankely fitaratra -Kinzon10 nampiasa SS304 ho an'ny famaky hinge manontolo mba ahafahana mitoetra lanja lehibe.
6. Ny satroka fiarovana: Varavarankely fitaratra varavarankely fitaratra -Kinzon10 dia mihatra amin'ny satroka fiarovana nylon amin'ny mombamomba ny fitaratra mba tsy handratra.
7. Hardware fifandraisana: Varavarankely fitaratra varavarankely fitaratra -Kinzon10 nampiasa faritra roa an'i Zinc izay mora mampifandray ny mombamomba roa track miaraka amin'ny zoro iray.
Varavarankely kinzon10-tranokala ampiasaina ho an'ny ankamaroan'ny karazana endrika bozoma, manokana ho an'ny famirapiratry ny terasa.
Ny mombamomba ny onitra:
Misy ny mombamomba ny onitra ho an'ny mombamomba ambony izay afaka manitsy ny elanelana eo anelanelan'ny varavarankely sy ny valindrihana.
Rollers tsara indrindra:
Ampiasao ny kodiarana mitondra kodiarana lehibe ary avereno moramora.
Takelaka fitaratra lehibe:
Ny halavam-bolan'ny Kinzon10 dia 750mm ary ny haavon'ny avo dia 2800mm ho an'ny takelaka fitaratra.
Ampiasao ny SS304 ho an'ny famakivaky ny bisikaly manontolo mba ahafahana mijoro lanja lehibe ary hialoha ny takelaka fitaratra mihintsana.
Ampiharo ny satroka fiarovana nylon amin'ny mombamomba ny fitaratra mba tsy handratra.
Mampiasà ampahany roa amin'ny Zinc izay mora mampifandray ny mombamomba roa track miaraka amin'ny zoro iray.
Eo amin'ny tontonana:
Ny halavan'ny max dia 800mm ary ny haavon'ny max dia 2500mm isaky ny takelaka fitaratra.
Previous: Rafitra Famoronana balkona Kinzon08
Manaraka: Famintinana Door Kinzon20
Famintinana Door Kinzon20
Varavarankely fitaratra fitaratra fitaratra
Famoronana fitaratra vita amin'ny vera tsy misy fotony Kinzon30
Door Kinzon20 Frameless
Pintina fitaratra vita amin'ny gorodona Kinzon10
Aforeto miorim-baravarankely Pinzon30plus